Home » Lahatsoratra farany farany » People » Tsidiho ny Carlsbad dia manambara ny Lehiben'ny mpanatanteraka vaovao
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Tsidiho ny CEO an'ny Carlsbad, Kim Sidoriak
Amin'ny andraikiny vaovao amin'ny maha filoham-pirenena & CEO an'ny Visit Carlsbad dia manantena ny hiara-hiasa amin'ny vondrom-piarahamonina sy orinasa eo an-toerana i Kim mba hampiroborobo bebe kokoa ny toerana haleha sy hampifangaro ny persona Visit Carlsbad amin'ny tanàna sy ny orinasa tsirairay. Mikasa ny hampisondrotra ny toerana itodiana amin'ny sehatra nasionaly izy ary hampitombo ny fahitana ao anatin'ny tsena lehibe, sady mampiasa fikarohana momba ny angon-drakitra mba handraisana fanapahan-kevitra am-pahalalana momba ny sakany sy ny fanateran'ny fikambanana.
Fikambanana marketing ho an'ny tanjona ho an'ny tanànan'i Carlsbad, Kalifornia dia manome anarana anarana CEO hafa.
Kim Sidoriak dia talen'ny marketing ho an'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Santa Monica talohan'ny nandraisany ny fitsidihana an'i Carlsbad.
Tsidiho ny Carlsbad dia mikendry ny hanandratra an'i Carlsbad ho iray amin'ireo toerana fizahan-tany voalohany any atsimon'i California.
Tsidiho ny Carlsbad, ilay fikambanana marketing ho an'ny City of Carlsbad, izay nanambara ny fanendrena ny filoha & CEO vaovao, Kim Sidoriak.
Talohan'ny nidirany tao amin'ny ekipa Visit Carlsbad, dia talen'ny marketing ho an'ny Kim Santa Monica Travel & fizahan-tany izay izy no tompon'andraikitra tamin'ny paikady, tetika ary programa nanamafy ny fahalianana, ny fangatahana ary ny fanekena an'i Santa Monica.
Miaraka amin'ity hetsika ity dia hiara-miasa amin'i Kim i Kim Tsidiho ny Carlsbad ekipa sy mpandray anjara lehibe hanandratra an'i Carlsbad ho iray amin'ireo toerana fizahan-tany voalohany any atsimon'i California.
At Santa Monica Travel & fizahan-tany, ny fandraisan'anjaran'i Kim dia nahitana ny fanovana ny mombamomba an'i Santa Monica sy ny fandefasana ny drafitra stratejika 5 taona an'ny fikambanana. Izy koa dia mpikambana ao amin'ny Visit California Brand and Content Committee ary nahazo mari-pahaizana Certified Destination Management Executive avy amin'ny Destination International.
Ny fifindra-monina any Carlsbad, dia mampanakaiky an'i Kim bebe kokoa amin'ny fianakaviana ary mikasa ny ho mpikambana maharitra amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny faritanin'i San Diego North County i Kim. "Faly aho fa akaiky kokoa ny fianakaviana akaiky, ary manantena fatratra ny ho tonga mpikambana mavitrika amin'ny vondrom-piarahamonina Carlsbad mavitrika," hoy i Sidoriak, izay nitana andraikitra tamin'ny fifandraisana amin'ny marketing ho an'ny Hilton Hotels Corporation sy Saatchi & Saatchi Advertising.
Amin'ny andraikiny vaovao amin'ny maha filoha & CEO an'ny Tsidiho ny Carlsbad, Manantena ny hiara-hiasa amin'ny vondrom-piarahamonina sy orinasa eo an-toerana i Kim mba hampiroborobo bebe kokoa ny toerana haleha sy hampifangaro ny persona Visit Carlsbad amin'ny tanàna sy ny orinasa tsirairay. Mikasa ny hampisondrotra ny toerana itodiana amin'ny sehatra nasionaly izy ary hampitombo ny fahitana ao anatin'ny tsena lehibe, sady mampiasa fikarohana momba ny angon-drakitra mba handraisana fanapahan-kevitra am-pahalalana momba ny sakany sy ny fanateran'ny fikambanana.
"Kim dia mitondra ny fifangaroana traikefa, fandraisana andraikitra ary ny toetra mampiavaka azy hitarika ny fikambanan'ny fikambanana ho tonga amin'ity toko manaraka ity amin'ny fitomboana," hoy i Troy Wood, Filohan'ny Birao mitsidika an'i Carlsbad. "Ny fientanentanan'i Kim, ny fahaizany mitondra ary ny fahaizany miasa ho an'ny fanatsarana ny tanàna dia hanampy amin'ny fanandratana ny fandaminana sy ny tanàna miaraka."
Kim dia nahazo mari-pahaizana licence momba ny serasera avy amin'ny University of Southern California ary ny fitiavany lehibe indrindra dia ny mitety izao tontolo izao hianatra momba ny kolontsaina samihafa.